Firefox Tweaks: esory ny zavatra tsy ilaina ary manatsara ny fampisehoana | Avy amin'ny Linux
Andro vitsy lasa izay dia namoaka lahatsoratra tao amin'ny bilaogiko manokana aho izay nanehoako ny hevitro izay tokony ho Mozilla Firefox. Amin'ny ankapobeny ny hevitro dia mifototra amin'ny zava-misy fa nandritra ny taona maro, Mozilla Firefox dia nitombo, na ny lanjany na ny safidiny, ka very ny soatoavina hafa izay nananany taloha.
Ohatra, manontany andiana fanontaniana manadihady aho:
Firy aminareo no mampiasa Salama hiresahana amin'ny namana na fianakaviana?
Firy no mampiasa Pocket?
Firy ny fitaovana mpamorona misokatra?
Impiry ianao no mampiasa ny serivisy azo ampidirina amin'ny tambajotra sosialy?
Mety ho maro amin'ireo mpamaky FromLinux no tena mampiasa ireto fitaovana ireto, saingy toa izany ve ny sisa amin'ireo olona izay mila rindranasa hidirana amin'ny Facebook, GMail, mijery horonantsary na manao zavatra toy io?
Amin'ny fampidirana ireo endri-javatra rehetra ireo, ny zava-mitranga dia mihalehibe ilay rindranasa, miha miadana kokoa, mavesatra ary na dia, heveriko fa mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ireo zavatra ireo ny mpamorona fa tsy manararaotra azy hanatsarana izay tena ilaina amin'ny tranokalan'ny mpitety tranonkala.
Tena azo antoka ve i Mozilla Firefox ary manaja ny tsiambaratelon'ny mpampiasa? Raha raisina ny zavatra hasehoko anao manaraka, ny valiny dia: manana ny zavatra tokony hatao tahaka izany izy, saingy tsy mampihatra azy io amin'ny toerana misy anao.
1 Inona no atao hoe Firefox Tweaks?
2 Ovao ny hafainganan'ny Firefox Tweaks
3 Ovao ny fiarovana / tsiambaratelo an'ny Firefox Tweaks
4 Ovao ny fisehoan'ny Firefox Tweaks
5 Ovao ny BLOATWARE an'ny Firefox Tweaks
Inona no atao hoe Firefox Tweaks?
Firefox Tweaks Tsy panacea io, tsy ny Holy Grail na zavatra hafa toa izany. Izy ireo dia toe-javatra sasantsasany azontsika apetraka ao anaty tranokalanay mba hanafoanana ireo fiasa tsy ampiasainay. Amin'ireo fanitsiana ireo dia afaka mahazo hafainganam-pandeha sy fahombiazana ihany koa isika, saingy eny, ataovy amin'izay mety hitranga aminao
Ny zavatra voalohany hataontsika dia a nomaniny ho solon'izay avy amin'ny mombamomba anay:
Vita izany dia sokafantsika ny browser, ary ao amin'ny kiheba vaovao no anoratantsika:
Mandainga kely isika milaza fa tsy hametraka ny tanantsika isika ary hanomboka hitady ireo masontsivana etsy ambany hanovana ny sandany.
Mba hanovana ny soatoavina dia mila manindry indroa fotsiny isika
Ovao ny hafainganan'ny Firefox Tweaks
Nalaina tao amin'ny Tor Browser 4.5.3 soatoavina.
network.http.max-fikirizana-fifandraisana-isaky ny mpizara »6
(Hatreto dia ny sanda default amin'ny Tor Browser)
Ampidiro ny rafitra cache vaovao:
Ovao ny fiarovana / tsiambaratelo an'ny Firefox Tweaks
Atsaharo ny WebRTC (tena zava-dehibe amin'ireo mpampiasa mampiasa VPN satria afaka manivana ny adiresy IP anao ny WebRTC):
Atsaharo ny bypass proxy DNS:
Atsaharo ny IPv6:
Atsaharo ny tatitra momba ny bibikely:
breakpad.reportURL »(avelao ny banga)
Atsaharo ny pinging:
Alefaso ny fiarovana amin'ny fanarahana:
Atsaharo ny geolocation:
geo.wifi.uri »(avelao ny banga)
Atsaharo ny geotargeting:
browser.search.geoSpecificDefaults.url »(avelao ny banga)
browser.search.geoip.url »(avelao ny banga)
Atsaharo ny telemetry:
toolkit.telemetry.server »(avelao ny banga)
Alefaso ny 'fitetezana azo antoka' aka. Fanarahan-dia / fitrandrahana ala Google:
Soraty ny 'google' momba: config ary mamafa ny rehetra na ny ankamaroan'ny rohy. Azonao atao ihany koa ny mikaroka sy mamafa ireo rohy mifandraika amin'ny:
Atsaharo ny WebGL:
Mametraha fanitarana tsy nasiana sonia:
Ovao ny fisehoan'ny Firefox Tweaks
Asehoy url feno:
Miverena amin'ny bara fikarohana taloha:
browser.search.showOneOff Buttons »diso
Esory "(site) izao dia efa feno":
Hatsarao ny pejy Tab vaovao:
browser.newtabpage.directory.ping »(avelao ny banga)
browser.newtabpage.directory.source »(avelao ny banga)
Atsaharo ny sary mihetsika tab:
Ampitomboy ny hafainganam-pandehan'ny dinika fiarovana rehefa mametraka extension:
Alefaso eyedropper amin'ny fitaovana fampivoarana:
Lohahevitra maizina ho an'ny fitaovana mpamorona:
Ovao ny BLOATWARE an'ny Firefox Tweaks
Atsaharo ny 'Mode mamaky':
listlist.server »(avelao ny banga)
Atsaharo ny 'Pocket':
browser.pocket.api »(avelao ny banga)
browser.pocket.site »(avelao ny banga)
Atsaharo ny 'Firefox Hello':
Atsaharo ny 'zavatra ara-tsosialy':
social.directories »(avelao ny banga)
social.shareDirectory »(avelao ny banga)
social.whitelist »(avelao ny banga)
Atsaharo ny mpamaky PDF:
Misy safidy hafa azo namboarina, misy aza ny plugin noforonin'ny namana iray izay mamonjy antsika amin'ny fanaovana izany rehetra izany, ka vantany vao misy io dia havoakako eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Firefox Tweaks: esory ny zavatra tsy ilaina ary manatsara ny zava-bita
xxxtonixxx dia hoy izy:
Plugin izao! Tweaks tena tsara !!!
Valiny amin'ny xxxtonixxx
Gaga aho rehefa hitako fa mamporisika ny fanajanonana WebRTC sy WebGL ianao: roa amin'ireo API HTML5 vaovao izay manana ny mety indrindra ary tsy mihetsika raha tsy ampiasain'ny pejy iray izany. Azoko tsara ny momba ny WebRTC fa azo antoka kosa ny WebGL. Raha ny fahalalako azy dia tsy mitahiry fampahalalana manokana ao amin'ny RAM misy ny carte de graphique ianao ... Ary koa ao amin'ny faritra fiarovana dia manonona ny fomba hampiasana ny fametrahana plugins tsy misy sonia !! Ny mifanohitra amin'izay ihany, tsy misy filaminana. Mitandrema tsara amin'ireo fikirana ireo.
Mitandrema, fa tsy namboariko ireo torohevitra ireo, raha tsy hiteny aho, ary araka ny nolazaiko tamin'ny fotoana sasany tao amin'ilay lahatsoratra, dia tsy ny fanatanterahantsika azy rehetra .. 😉
Omaly fotsiny aho dia nanana olana tamin'ny fahombiazana tamin'ny Firefox, tamin'ny farany dia tsy maintsy nesoriko ireo fanitarana rehetra ary nanomboka tamin'ny voalohany indray aho.
Androany hitako ity lahatsoratra ity ary io indrindra no tadiaviko.
Misy zavatra mitranga amin'i Firefox, izay tato anatin'ny andro vitsivitsy izay dia nanana olana aho na teo amin'ny Android, Mac, Ubuntu, ary teo aloha tao amin'ny Arch, dia mikatona tsy tapaka izy ary tsy maintsy averiko izany mba ho toy ny aorian'ny fametrahana. Mahaliana amin'ny Windows fa saika tsy nahomby izy io. Ankoatry ny mavesatra dia somary milamina ihany koa izy io.
Nanova vitsivitsy aho, na dia misy aza ny sasany hamelako azy ireo ho fenitra.
Hiova ve ireo sanda ireo isaky ny manavao ny Firefox?
Bravo, bravazo !!! =)
Misaotra, fampahalalana tena mahaliana. Fanontaniana iray: misy fomba hidirana an'ireto toe-javatra ireto amin'ny tsipika baiko
Misaotra mialoha. Fiarahabana.
Valiny tamin'i Toniem
Tsy hoe fantatro, farafaharatsiny tsy mivantana.
mimo dia hoy izy:
Raha mangataka ny hahamora ny tsy fitadiavana ny fananana tsirairay ianao amin'ny: config, fa ny fanovana azy amin'ny script na ny mitovy aminy, azonao atao ny mametraka ireo izay tadiavinao ao anaty rakitra fikirakirana (tena ilaina tokoa ny manana Nijanona i Firefox alohan'ny hikasihany an'io fisie io, ary manaova backup ny mombamomba azy araka ny natoron'i Elav).
Anisan'ireo fanehoan-kevitra tao amin'ilay bilaogin'i Elav misy ohatra iray.
Amin'ny fomba Elav, tena antony! Saingy mbola manana zavatra mahasarika ahy ny Firefox (ankoatry ny zavatra hafa, ny bara fikarohana ihany koa dia mitady ny tantara, ary hitako fa tena ilaina izany. Chromium, farafaharatsiny rehefa nanandrana aho dia tsy nitovy, na tsy nitovy).
Mamaly an'i mime
Misaotra ny valiny. Izy io dia ny famoronana script, satria tsy maintsy mitantana solosaina maro be aho, dia ny mpianatro.
Mamaly eto aho satria tsy afaka mamaly mivantana an'i Toniem.
Raha tianao hitovy hatrany ny fikirakira anao rehefa mamerina Firefox ianao, dia ampiasao ao amin'ny piraofilina ilay rakitra user.js: http://kb.mozillazine.org/User.js_file
Ny fanovana an'ity rakitra ity dia mamerina ny fampifanarahana ireo toetra mitovy ao amin'ny prefs.js, noho izany dia tsara ny manao backup azy alohan'ny hamoronana ny mpampiasa.js.
Ary hamafana ireo toe-javatra ireo, ankoatry ny famafana ny mpampiasa.js, tsy maintsy mamafa ireo fanovana mitovy amin'ny prefs.js ianao.
Noho ny fiasan'ny mpampiasa.js dia azo atao tsara ny manisy fifehezana ny fikirakirana (na dia azo ovaina aza izy ireo eo amin'ny: config, rehefa averinao indray ny Firefox, manjaka ny sandan'ny mpampiasa.js)
Mikasika ireo toe-javatra nomenao an'i Firefox, ny sasany dia tena tsara ho an'ny netbook-ko. Na izany aza, hatreto, Salama, tsy hitako izay dikany noho ny fidiran'ny olona ambany (raha toa ka nampidirina Tox, tena tsara).
Mifanohitra amin'izay lazainao dia mampiasa Hello aho, toa fitaovana tsy mampino amiko izany, tsy toy ny fomba hafa fanovana skype izay mahatonga ny namanao hametraka zavatra tsy fantany ny olana, eto dia mila mizara rohy fotsiny ianao, it mandeha tsara (zavatra tsy mahomby firy amin'ny skype) feo tonga lafatra ary amin'ny endriny vao haingana dia mandany cpu kely izy, rehefa novakiako tao amin'ny kinova 41 izy ireo dia hampihatra ny safidy xat amin'ny fiteny Hello, tiako ity safidy mahafinaritra ity miresaka
Tiako raha milaza hevitra momba ny fomba fampiasanao azy ianao raha mampiasa Hello, tsara raha afaka mampiasa an'ity rindranasa ity izay ao anatin'ny rindrambaiko malalaka sy tsy orinasa toy ny tarehy, googlu, sns.
Tsindrio fotsiny ilay tarehy mitsiky, omenao izay lazainy hanombohana resaka, amin'ny alàlan'izany dia hampavitrika ny webcam-nao, azonao atao ny misafidy ny hizara fakan-tsary na ianao irery ihany, manome izay voalaza fa handika rohy, ary ianao alefaso any amin'ilay olona tianao hiresahana. efa nizaha toetra tamin'ny olona mampiasa chrome sy firefox fotsiny aho.
Tokony hazavaiko fa miarahaba anao ity vaovao avy ao anaty lafaoro ity, nandany cpu be dia be nampiakatra ny mari-pana ny pc amin'ny alalàn'ny tafo, zavatra iray izay tsy mitranga intsony, manana fampisehoana tena tsara.
Amin'ny alàlan'ny famakiana elav amin'ny bilaoginao manokana, tsy azoko hoe nahoana no milaza fa ny firefox dia tokony hoe tsy nanome antony nahatonga anao ho mahery setra loatra fanatic, tsy nisy fanafintohinana ..
Eny, ianao no hitako voalohany milaza fa miasa ho azy i Hello. Tsara vintana ianao 😀
jmsanzd2 dia hoy izy:
Tsia, raha mba hitsapana fotsiny dia efa nampiasaiko ihany koa, ary mety tsara izany.
elav, arahaba soa amin'ny lahatsoratra. Mahavariana ny zavatra nataony tamin'ny firefox-ko, na dia tsy nampiasa ny fikirana rehetra nolazainao aza. Vitantsika tao an-trano izany tamin'ny debian sy linux mint ary tao amin'ny solosainan'ny vadiko, avy any amin'ny lafiny maizina, ary amin'ny tranga rehetra dia tena nahafa-po ny valiny.
Na ahoana na ahoana, azo ampiasaina amin'ny solosaina misy ondrilahy 1GB ve ireto fanovana ireto?
Valio i jmsanzd2
Ao amin'ny pejin'ny add-on Firefox dia misy extension iray antsoina hoe Privacy Settings, izay manao zavatra mitovy amin'izany.
Fanamarihana tena tsara! Mety ho tonga ny fotoana hihaonako amin'i Mozilla 😛
Miaraka amin'ity plugin ity izay hitako tao https://www.privacytools.io/:
Azonao atao ny manao fanovana maromaro nolazain'i Elav, tsy haiko raha misy mampiasa azy io taloha mba hahafahako manome ny heviny?
Hahaha na amin'ny chromium na amin'ny Ubuntu, ny zavatra mombamomba azy dia mahaliana.
neph dia hoy izy:
Ahoana no fomba hamerenako ny mombamomba ilay tahiriko
Nanao fanovana vitsivitsy aho ary ratsy kokoa….
Valio i neph
lucas mainty dia hoy izy:
misaotra anao, novaiko ny zava-drehetra miampy torohevitra 3 na 4 izay manampy amin'ny fanatsarana ny loharanom-pahalalana, izay hita eto:
Mamaly an'i lucas black
aspol dia hoy izy:
Fampahalalana bebe kokoa eto:
Mamaly an'i aspol
Famerenana lohahevitra mahazatra Izy io koa dia ahafahanao manamboatra zavatra maromaro asehon'ilay lahatsoratra (jereo ny fizarana "General user interface" sy ny "Advanced").
tsy misy toa azy ireo manome ny tolo-kevitra sy ny fanazavana ny sasany amin'ireto torohevitra ireto.
jedr dia hoy izy:
Misaotra an'ireo torohevitra ... ankehitriny ny aceweasel dia mihazakazaka haingana kokoa noho ny tamin'ny debian ...
Mamaly an'i jedr
Misaotra betsaka anao noho ny torohevitra manome hevitra mampiasa Chrome sy iceweasel roa amin'ny navigators. Heveriko fa azoko atao izao ny manala ny chrome-ko amin'ny debian 😀 .. mihazakazaka haingana ny iceweasel